Masada, dia mankany amin'ny tantara | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Isiraely, Inona no ho hita
Fony aho mbola kely dia nisy andianà fahitalavitra tena malaza antsoina hoe Masada, tantara an-tantara misy kintana amin'izao fotoana izao toa an'i Peter O'Toole, Peter Strauss ary Barbara Carrera. Tamin'izay aho vao nandre ny anaran'ny Masada sy ny tantarany. trano mimanda tany an'efitra Jodianina any Israely.
Androany ny rava, goavambe ary mbola lehibe, mamorona ny Valan-javaboary Masada ary izy ireo dia Lova manerantany, ka raha mandeha mitsidika an'i Isiraely ianao indray andro any, dia tsy azonao atao ny mamela azy ireo hiala ny lalanao.
2 Fizahantany Masada
Ireo rava dia misy lapa sy trano mimanda naorina teo an-tampon'ny havoana tany Jodia, akaikin'ny Ranomasina Maty, any Isiraely ankehitriny. Ny andian-tantara amin'ny televiziona noresahinao etsy ambony dia milaza amintsika ny fotoana farany tamin'ny ady teo amin'ny Jiosy sy ny Romana, fantatry ny tantara amin'ny hoe Fikomian'ny Jiosy Lehibe. Niala tany ny vahoaka jiosy ary nanao fahirano ny toerana ny Romana ary nanao fahirano azy mafy izy ireo mandra-pifidianan'ny voafonja hamono tena.
Noho izany, Masada dia zavatra iray mitovina amin'ny fanindrahindram-pirenena jiosy sy ny fanamafisana azy amin'ny maha-vahoaka azy. Hatramin'ny 1966 ny faritra iray manontolo dia lasa Valan-javaboary, nanomboka tamin'ny 1983 dia tao anatin'ny Reserve Reserve voajanahary Desert Judean ary nanomboka ny taona 2001 dia toerana iray vakoka manerantany araka ny UNESCO izy io.
Ny velaran-tany ijanonan'i Masada dia ao anatin'ny masifisialy tectonic massif, tsy misy riaka be, tsy miova endrika nefa mitovy amin'ny piramida tsy misy teboka. Mirefy 645 metatra ny halavany, 315 ny sakany, ary 9 hektara ny velarany. Amin'ny ilany atsinanana dia misy hantsam-bato 400 metatra ny haavony ary amin'ny lafiny iray hafa dia manodidina ny XNUMX metatra izy ireo. Ka sarotra ny fidirana mankany an-tampony.
Na dia hita aza ny sisa tavela tamin'ny tanàna taloha, dia hoy ny mpahay tantara Flavio Josefo fa ny mpanjaka Hasmoneana Alexander Janneo dia nanao ny trano mimanda ary ny fahitana vola madinika sy stucco sasany tamin'izany fotoana izany dia midika fa tsy diso ilay hevitra. Saingy ny tantaran'i Masada izay mahaliana antsika dia taty aoriana ary nitranga tamin'ny fotoana nandresen'i Pompey an'i Jodia.
Ny mpanjaka Heroda, malaza, trano nipetrahan'ny fianakaviany teto raha nandeha nankany Roma izy mba hangataka fanamafisana hifehezana ny faritra. Ny trano mimanda dia nahatanty fahirano mafy nataon'ny Parthians, ary oram-pahagagana ihany no namonjy azy ireo tsy ho resy, satria lany rano izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, tany Roma, Heroda dia nahazo ny fanampiana notadiaviny ary niverina izy Mpanjakan'i Jodia ary nandresy tsikelikely ny faritra izy ka nahatonga an'i Jerosalema nianjera.
Saingy fotoan-tsarotra izy ireo: notohanan'i Marco Antonio Cleopatra VII nanitatra ny fanjakany, noho izany Heroda dia nanatanjaka an'i Masada nieritreritra fa indray andro any dia mila toerana tsy takatry ny saina izy. Folo taona taorian'ny nahafatesany, ny Jiosy voalohany - Ady romana satria ny fihenjanana dia amin'ny crescendo. Andiana jiosy mahery fihetsika no niasa tamin'ny fikomiana, ny hafa nanatevin-daharana ary tamin'ny farany dia vondrona iray Copó Masada namono ny tobin'ny Romanina nipetraka teo.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia volkano ity faritra ity ary i Masada dia fantatra fa toerana misavoritaka indrindra. dia nandray ny andraikiny ny Romana ary nanapa-kevitra ny hamono ireo mpitsoa-ponenana jiosy tany manodidina azy amin'ny tobin'ny miaramila maro. Ny komandà dia nanomana ny zava-drehetra tamin'ny antsipiriany, nifantoka tamin'ny fidirana amin'ny fidirana amin'ny fidirana andrefana. Rehefa avy nanandrana namaky ny rindrina tsy nahomby izy dia nanapa-kevitra ny hanamboatra lalambe izay rehefa afaka herinandro maromaro dia nahatratra 100 metatra ny haavony.
rehefa fito volana fanaovana fahirano Vita ny arabe ary tilikambo fanaovana fahirano vy metatra 30 metatra no naorina teo an-tampony. Avy eto dia nitifitra ny Romana ary niasa ilay ondrilahy nanome azy tamin'ny rindrina. Rehefa afaka kelikely dia tsapan'ny Romana fa ny Jiosy dia nanorina mafy kokoa tao ambadiky ny rindrina, koa nofoanana ny fanafihana ary nodorany io rafitra io.
Sahirana ireo Jiosy tao Masada ary nanapa-kevitra ny hamono tena: Novonoin'ny lehilahy ny fianakaviany ary nifidy folo izy ireo avy eo. Ary toy izany hatrany mandra-pahatongan'ny lehilahy iray sisa tavela izay, tamin'ny fijanonana irery, dia nandoro ny trano mimanda. Rehefa niditra ihany ny Romana dia nahita fasana izy ireo.
Fa oviana no hitan'ny arkeology i Masada? Tamin'ny fiandohan'ny Taonjato faha-XIX, tamin'ny 1838 manokana. Nanomboka teo dia nanjary nahaliana tokoa ilay faritra ary nohadina sy natao sarintany ny zava-drehetra. Nisy fihadiana arkeolojika lehibe nitranga tamin'ny taona 60.
Inona no azo jerena ao Masada? El tandrefana Azo zahana avy any Arad, amin'ny zotra 3199. Eto no hahitanao ny fanarenana ny milina romana manomboka amin'ny tranokala ka hatrany Masada, ny lalana romana izay ny fiakarana dia misy eo anelanelan'ny 15 sy 20 minitra fiakarana, ny lava-drano taloha avaratra nihady avy tany an-tendrombohitra ary, tamin'ny vidiny hafa, afaka mijanona matory an-day ianao. misy koa a seho hazavana sy feo amin'ny alina ao amin'ny amphitheater.
Eo amin'ny lembalemban'ny tendrombohitra no misy ny rava ny lapa avaratra, izay sisa tavela amin'ny lapam-panjakana manokana misy ambaratonga telo an'i Heroda misy gorodona sy rindrina vita amin'ny rindrina, izay sisa tavela amin'ny ny sinagoga sisa tavela tamin'ny fotoan'ny Tempoly faharoa, ny efitrano nahitana ny anaran'ny hitmen rehetra, ny vondrona jiosy maro an'isa izay nihidy tao Masada nandritra ny fikomiana, a fiangonana byzantine naorin'ireo moanina herita ihany koa misy gorodona mozaika, ny Lapan'ny Tandrefana, goavambe ary koa nanomboka tamin'ny andron'i Heroda, ny fandroana romanina, efitranon'ilay komandy misy hosodoko sy ilay lavadrano atsimo, habakabaka ambanin'ny tendrombohitra.
Miditra amin'ny Ranomasina Maty, zotra 90, miditra amin'ny fidirana atsinanana izay misy a fivarotana fanomezana, tobin'ny vonjy taitra voalohany, a trano fisakafoanana sy kafe.
Ity koa ilay Masada Yigal Yadin Museum, nosokafana tamin'ny 2007, izay manome traikefa fitantarana momba ny zava-nitranga manodidina ny trano mimanda, manome zavatra tsara lafika mitsidika, ny lalamby izay mitondra anao ho eo am-baravaran'ny Làlan'ny Menarana, ny sarotra indrindra, izay azo saronana an-tongotra izao, misy adiny iray ambony sy sasany.
Tena mahafinaritra ilay fitsidihana. Azonao atao amandriho ny fidirana amin'ny Masada National Park amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny tranonkala ofisialy, mifantina ny daty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Masada, mandeha amin'ny tantara